ओलीलाई प्रधामन्त्री बनाउन जन्मेको हो र हामी : राजेन्द्र महतो - Rubas News
ओलीलाई प्रधामन्त्री बनाउन जन्मेको हो र हामी : राजेन्द्र महतो
महेन्द्रनगर : जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफुहरुका माग पुरा नभएसम्म सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि नेता महतोले प्रत्रकारहरुसंगको कुराकानीमा उधारो सहमती नहुने बताएका हुन । “ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जन्मेको होर हामी ? उनले थपे–“सित्तैमा समर्थन हुन्छ ? हामीले भन्दै आएका सबै माग पुरा हुनुपर्छ ।” सरकारको समर्थन मात्रै गर्ने की दाबी पनि गर्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने क्षमता नभएको बताए । रेशम चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधन लगायतका माग अघि सारेको उनको भनाई छ ।
Previousखै भन्न त एमालेकै सरकार भन्छन्, मलाई थाहा छैन : माधव नेपाल
Nextमाओवादी केन्द्रमा फर्कने सम्भावना देख्दिनँ : लेखराज भट्ट